China simbi zvigadzirwa zvigadzirwa - china simbi zvigadzirwa zvigadzirwa, vatengesi
Triangular yakakotama Rakakomberedzwa Fence
Welded Mesh Fence ndeye yakasarudzika vhezheni yeiyo feni system, yakavakwa kubva kune yakasungwa mesh fenzi paneji ine marefu marefu profiles ayo anoumba akaomarara fenzi. Iyo fenzi pani yakasungirirwa neakakwira mhando yakaderera kabhoni simbi waya, pamusoro yakarapwa ne electrostatic polyester poda yekupfekedza kupfeka pamusoro pezvinhu zvakagadzirwa. Wobva wabatanidza iyo pani yepaneru nepositi nezvakakodzera clip. Nekuda kwechimiro chayo chakareruka, kuiswa kuri nyore uye kutaridzika kwakanaka, vatengi vachiwedzera uye vanoona welded mesh fenzi seyakajairwa inowanzo dzivirirwa fenzi.
Kushanda: Inogona kucheka kabhoni simbi, simbi isina simbi, mhangura, aluminium nemamwe mapaipi uye maprofiles, senge: iyo chubhu, pombi, oval pombi, rectangular pombi, H-danda, I-danda, kona, chiteshi, nezvimwe. inoshandiswa zvakanyanya mumhando dzakasiyana dzemapaipi ekugadzirisa munda, indasitiri yekuvaka ngarava, dhizaini simbi, simbi, mainjiniya egungwa, mapaipi emafuta uye mamwe maindasitiri. Zvigadzirwa Nhanganyaya: Rudzi urwu rwefenzi runogadzirwa newaya yakasungwa waya uye pombi yesimbi. Kune iyo fenzi, zviri nyore ini ...